Kutaa Tokkoffaa - Kutaa Sadaffaa
Tulluu Caalii 03/11/2016
Gaaffii mirga ofiin of ulchuu ummati Oromoo dhiheessu gita bittoota Habashaa biratti yakka ol-aanaatti lakkaa’ama. Barreeffama kiyya darbe keessatti diddaa gabrummaa Oromooti kaabaa agarsiisan ukkaamsuuf tarkaanfii laalessaa fi suukanneessaa mootiin Tigree Aatsee Yohaannis 4ffaa uummata kana irratti raawwate hanga muraasa yaadachiisuu yaaleen ture. Kanuma maalii? maalumaaf ?ol aantummaa Tigree mormitan jedhee Oromoota ollaa Tigraay irratti duula bal’aaa banee lafa irraa haxa’e.Yeroo inni ergamaa koo, nama Tigraayi tokko ajjeesan jedhee Oromoota Raayyaa walgahii waamee nama kuma sadii(3000) ol al-tokkotti dirree Ingooyyee jedhamu irratti gara jabinaan ajjeesetu ture. Gumaa nama tokkoo Oromoota kuma sadii ol fixee baafate. Akkasumas dirree Boruu Meedaa jedhamu irratti Oromoota kuma hedduu fixe. (“ይህን አመጸኛ ህዝብ ልክ እናስገባለን።”) kan jedhuun Oromoo bakka arganitti jimilaan ajjeesaa, reebanii caccabsaa, naaffisaa jaamsaa, beeyladaa fi qabeenya inni qabu hundaa, manaaf fi midhaan isaanii maasii irratti guban. Abbaayi Tsahaayyeefaa jecha “ልክ እናስገባለን(Sirriitti galchina) jedhu abbootii isaanii kana irraa waan dhaalan fakkaata.
Kutaa tokkoffaa barreeffama kanaa keessatti immoo gocha jibbisiisaa mootummaan Haayila Sillaasee Oromoota Raayyaa irratti raawwate hanga tokko wal yaadachiifna.
Oromooti Raayyaa bara 1928 sirna mootummaa koloneeffataa Raas Tafarii Makonnin(booda Haayila Sillaasee moggafame) irratti fincilan. Diddaa gabrummaa Oromooti Raayyaa agarsiisan Raas Tafariin ብጥብጥና ሁከት (jeequmsaa fi hookkara), ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ( sochii seeraa alaa) jedhee maqaa hin taane itti kennuun waraana guddaa nama Qanyaazmaach Fiqramaariyaam jedhamuun durfamu itti bobbaase. Kana malees humna dabalataa Dajjaazmaach Dastaa Daamxoon(booda irra Raas Dastaa jedhame) hoogganamu itti duulchise. Oromoota Raayyaa bebbeekamoo fi uummata nagaa jimilaan ajjeesuutti bobba’an. Haa ta’u malee tarkaanfii ajjeechaa fi saamichaa isaan raawwatan fincila sana ni hammeesse malee hin dhaamsine. Waraanni Dastaa Daamxoo nyaata uummata irraa humnaan dirqee nyaachuu fi qabeenya namaa saamuun immoo diddaa uummataa daran finiinse.
Haayila Sillaaseen bulchitoota naannoo Walloo jijijjiiruun fincila uummataa qabbaneessuu yaalu iyyuu hin dandeenye. Bara 1929 Labsii akeekkachiisaa labsii yeroo muddamaa Wayyaane yeroo ammaan wal fakkaatu baasu iyyuu fincilli Rayyaa jabaatee itti fufe malee hin dhabbanne. Kanaaf Raas Tafariin bita mirgaan Oromoota Rayyaa irratti duulchise. Haa ta’u malee Oromooti Raayyaa jagnummana lolanii meeshaa lolaa iyyuu diina irraa hiikkatan. Humna Fitawuraari Bazaa jedhamuun hoogganamu qofa irraa qawwee 2000 ol akkasumas qabeenya adda addaa irraa booji’an.
Diddaan Oromoota Raayyaa gaafa itti cime Raas Tafariin(Haayila Sillaasen) Oromticha Yajuu Oromticha Raas Gugsaa Walee isa gargaree akka itti duulu ajaja dabarse. Haa ta’u malee Raas Gugsaa Walee Oromoota Raayyaa loluu hin barbaadne. Inumaahuu Raayyaa wajjin walii galee sirna HS irratti fincile. Wayta kana ture Raas Tafariin(HSn) namoota yeroos dhiha Tigraayi bulchaa turan Waaqshum Kabbadee fi Raas Gugsaa Aar’iyaa jedhaman akka isaan Raayyaatti duulan kan ajaja itti dabarse. Waaqshuum Kabbadee oolee osoo hin bulin waraana isaa qabatee Raayyatti duule. Waraanni Waaqshum Kabbadee akka Raayyaa seeneen keessaahuu naannoo Dayyuu yeroo gahe manneetii Oromoo gubuu fi uummatatti taphachuu jalqaban. Oromooti naannoo Dayyuu hedduutu dhume. Waraanni Waaqshum Kabbbadee beeylada uummata Oromoo hedduu saamee ooffate. Raas Gugsaa Aar’ayaas ajaja HS fudhatee humna waraanaan Raayyaa naannoo Mahonii, Carcar fi Iibootti duule. Namni Dajjaach Ayyaalewu Birruu jedhamu immoo Laastaa keessa bahee Waajii fi naannno sana akka weeraru taasifame. Hanga magaalaa Qobboottis deemanii balaa gurguddaa uummata irraan gahan. Manneen uummataa gubuu, dhalaatti taphachuu fi qabeenya saamuu hojii guyya guyyaa taasifatan. Midhaan uummataa maasii irra jiru gubuunis waanuma ture dha. Haa ta’u malee Oromooti Raayyaa duula waraanaa kana hundaaf hin jilbeenfanne. Ji’a Bitootessaa bara 1929 naannoo Qobbootti wal gurmeessanii waraana HS irrattti trkaanfii of itisuu fudhatan.
Haayila Sillaaseen ijibbaata humna waraanaa ministeera waraana isaa yeroosii, Raas Mulugeetaa Yigazuun hoogganamu itti bobbaase. Wayta inni Raayyaa gahu Oromitichi Yajuu Raas Gugsaa Walees Raas Tafarii Makkonnin irratti fincile. Gugsaa Wale